Bhinzi dzakasvibirira neMushroom Bolognese | Kicheni Mapepa
Mahonji eGreen nemaMushroom Bolognese
Loreto | | General, Mapepa ane Mushroom, Nyama Recipes, Vegetable Recipes, Mapepa ane hutano, Nyore Mapepa, Sauces
Tinogona kugadzirira akawanda mabikirwo, zvichibva pane zvakasiyana zvigadzirwa, miriwo, nyama, hove, nezvimwe. Uye kusangana pakati pavo kunoenderana nezvatakada kana zvatiri kuda kuyedza.
Zvine musoro mumwe nemumwe achasarudza izvo zvavanofarira. Uye nhasi ndiri kuenda kunogadzirira zvimwe bhinzi dzakasvibirira nehowa Bolognese. Musanganiswa unonaka uyo unofanirwa kuyedzwa pasina kupokana kusiyanisa kwakakosha.
Semazuva ese, tinotenga tunhu tudiki uye isu tinoronga iyo nguva yekugadzirira mabikirwo edu ezuva ranhasi.
Dhigirii reDambudziko: Easy
Nguva yekugadzirira: 30 - 40 maminetsi
Zviratidzo zvevanhu 2:
500g bhinzi yegirini
250 minced yemombe
Isu tatova nezvakagadzirwa isu tinongoda kusvika pairi kuzadzisa iyo yekubheka.
Takatanga kufashaira bhinzi yegirini. Nekamwe munyu uye varege vabike kusvikira zvanyorovera
Kune rimwe divi tinoisa pamwe nehowa, isu tinocheka uye nekugadzirira kuti tiwedzere kumusanganiswa.
Isu tinoisa minced beef, mune yangu ndeye yerudzi urwu asi inogona kunge inguruve kana imwe mhando. Isu tinoirega ichibika kwechinguva uye isu tinowedzera howa, mune angu iwo howa nekuti ini ndinohufarira zvirinani.
Isu tinorega zvese zviitwe uye tinowedzera nyanya nyanya, Kana tave nezvose zvakasanganiswa tinozvirega zviitwe kwekanguva.
Tinowedzera mvura uye rega muto usvuke zvishoma, kuravira.
Isu tinodurura bhinzi yakasvibira uye isu tinogona ikozvino kuzviwedzera kune musanganiswa wehowa, matomatisi uye nyama minced.
Isu tinorega izvo zvigadzirwa zvichinyura mukati uye isu tine chikafu chinogadzirirwa. Sezvauri kuona, ndinodzikamisa kushandiswa kwezvishongedzo zvemuto, sezvo pfungwa iri yekuwana yakaderera macalorie recipe, sezvo uchigona kuita yakanaka kurunga-fry newaini nemaarumondi etc.
Solo Ndinofanira kukushuvira rombo rakanaka uye kuti unonakidzwa neresipi iyi uye kugadzirira kwayo
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Mapepa ane Mushroom » Mahonji eGreen nemaMushroom Bolognese
Zhizha mbatata saladhi
Chicken Curry neMiriwo